Nagarik Shukrabar - ‘जीवनै परिवर्तन गर्ने किताबचैँ पढिएको छैन’
शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७८, ०६ : १७
‘जीवनै परिवर्तन गर्ने किताबचैँ पढिएको छैन’
बिहिबार, ०७ मङि्सर २०७४, ०३ : ३८ | रेणु त्वानाबासु
पाँच वटा आख्यान प्रकाशन गरिसकेका राजेन्द्र पराजुली एउटा स्थापित साहित्यिक अनुहार हुन् । विकल्प यात्रा, जाडोमा भोक, सपनामा माक्र्स र शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा कथा संग्रह तथा अनायिका उपन्यास र भ्रष्ट संवेदना कविता संग्रह उनको खातामा छन् । पराजुलीसँग शुक्रवारले गरेको पठन संवाद ।
अहिले पढ्दै गरेको पुस्तक ?
पल बिटीको ‘द सेलआउट’ र अर्चना थापाको ‘कठपुतला’ ।
जीवन परिवर्तन गरिदिएको पुस्तक ?
जीवनै परिवर्तन गरिदिने पढ्न नपाएको हो कि पुस्तक पढेर त्यस्तो महसुस चाहिँ भएको छैन है । साहित्य पढेर जीवनै परिवर्तन त होलाजस्तो पनि लाग्दैन । राम्रो पुस्तक पढेपछि पढुञ्जेल मजा आउने, दिमागलाई हल्लाउने त हुन्छ नै तर जीवनै परिवर्तन भने भएको छैन ।
काश, त्यो पुस्तक मैले लेखेको भए !
मलाई कहिलेकाहीँ कुनै कुनै साहित्य वा लेखकको लेखनी देख्दा त्यस्तो लाग्छ । मैले नै त्यो लेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । खासगरी सोसल रियालिजममा लेखिएका कैयौँ कथा वा पुस्तकहरु पढ्दा ती त मेरै देशको कथा हो, मेरै परिवेश र व्यक्तिहरु झलझली देख्छु । अनि काश, मैले त्यो लेखेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर त्यो पहिल्यै लेखिसकिएको हुन्छ । खासगरी एन्टोन चेखवका कथाहरु पढ्दा त्यस्तो महसुस गराउँछन् । नेपालकै कैयौँ कथा वा लेखनी पढ्दा पनि मलाई त्यो फिल हुन्छ ।
मेरो लेखनीमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने पुस्तक वा लेखक ?
ममा भारतीय लेखकको थुप्रै प्रभाव छ । प्रेमचन्द, सहादत हसन मन्टोबाट म धेरै प्रभावित छु । सोसल रियालिजम मलाई मन पर्छ । अरु त्यस विधामा लेख्नेहरुले प्रभाव पार्ने गरेका छन् ।
सबैभन्दा कम चासोमा परेको महत्वपूर्ण पुस्तक ?
क्लासिक किताबहरु नयाँ पुस्ताले पढेको छैन, त्यो देख्दा मलाई चिन्ता लाग्छ । जनकलाल शर्माका थुप्रै पुस्तक नयाँ पुस्ताले नामै नसुनेका हुन सक्छन् । कतिपय निबन्ध त अखबारमै पनि छाप्न मिल्छ । त्यस्तै धच गोतामेका चर्चा कम भएका छन् । भाउपन्थीका पनि कथा पनि त्यस्तै देखिछन् । माधव पोखरेलका निबन्ध राम्रा हुन्छन् । मोहन शर्माका २०४० सालतिर लेखेको ‘जेमन्त’ नाटकको कुनै चर्चा हुँदैन तर त्यो ज्यादै स्तरीय र कलात्मक छ । दौलत विक्रम विष्टको ‘चपाइएका अनुहार’ पनि त्यस्तै पुस्तक हो । पाठयक्रममा नपर्ने पुराना पुस्तकको चर्चा नै हुँदैन । अहिलेका प्रकाशकहरुले रिप्रिन्ट गरेर चर्चामा ल्याइदिए हुन्थ्यो । राजेश्वर देवकोटाका पुस्तक पनि चर्चामा छैन । यिनीहरु जिम्मेवार लेखक हुन् । तिनका केही किताब त बुलन्दै राम्रा हुन्छन् । बिपी पनि राजनीतिमा नसम्झिने पात्र भएका भए उनका किताब हराउँथे होला । भवानी भिक्षु नै त्यस्ता पात्र हुन्, पोषण पाण्डे पनि त्यही वर्गका हुन् । हिजोआज त विद्यालय र कलेजमा पार्टीका कोटाबाट पर्ने साहित्यकारका पुस्तकका मात्र चर्चा हुन्छन् । यसले हाम्रो साहित्य धरोहर नष्ट हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
पछिल्लो एउटा पुस्तक जसले मलाई रुवायो ?
पहिला त पढेर रुने थुप्रै साहित्य थिए । मुनामदन, गौरीले मलाई धर्धरी रुवाएका थिए तर हिजोआज पढेर रोएको भने छैन । कतिपय आत्मकथा पढेर रोएको थिएँ तर पछिल्लो समय हँसाउने आत्मकथा बढी छन् । किन थाहा छ ? उनीहरुको वास्तविकता एउटा हुन्छ, लेखेको अर्को हुन्छ ।
पछिल्लो पटक पढेको एउटा पुस्तक जसले मलाई मज्जैले हँसायो ?
तरुण जे. तेजपालको ‘द केमेस्ट्री अफ डिजायर’ले बीचबीचमा हँसायो तर पूरै हँसाउने किसिमको उपन्यास भने होइन ।
पछिल्लो एउटा पुस्तक जुन पढेर मैले कपाल भुत्ल्याएँ, किन पढेछु भनेर पछुताएँ ?
त्यो त मैले नाम लिन र भन्न मिल्दैन । भनेँ भने मलाई कुटेर मार्छन् । अँहँ, भन्नै मिल्दैन । पढ्दापढ्दै मैले आफ्नै कपाल लुछेका किताब थुप्रै छन् । एक त पैसा हालेर किताब किन्नु छ, पढ्दा पनि उल्टै पछुताउनुछ । दिक्दारै लागेका कैयौँ पुस्तक छन् ।
ती पुस्तक जो मैले कहिल्यै अन्त्यसम्म पढ्न सकिनँ ?
केही किताब मन परेर आधा पुगेर छोडेका छन् तर मन नपरेर होइन । पछि फेरि पढूँला भन्ने लागेर छोडेका छन् । अहिले सम्झँदा तीमध्येको एउटा भारतीय लेखक पी. साइनाथको ‘एभ्रीबडी लभ्स अ गुड ड्राउट’ हो । यो ७५ प्रतिशत पढेर छाडेको छु । पछि पढ्छु ।
नराम्रा किताब चाहिँ म बरु पढ्नै बस्तिनँ । त्यसैले आधामै छाड्नु पर्दैन वा अन्त्यसम्मै पढ्नलाई कुर्नु पर्दैन । सुरुमा तान्यो भने किताब अघि बढ्यो, तानेन भने पढ्दिनँ ।
पढ्न नपाएर लज्जित तुल्याएको त्यो पुस्तक ?
मान्छेले पढ्छन्, कुरा गर्छन्, आफूले पढेको हुँदैन । त्यस्ता किताब थुप्रै हुन्छन्, छन् । अरुन्धती रोयको ‘मिनिस्ट्री अफ अटमोस्ट ह्यापिनेस’मा त्यस्तै भएको छ । कतिपय नोबेल पुरस्कार पाएका वा चर्चित पुरस्कार पाएका अन्य कैयौँ किताब पनि भनेका बेला पढ्न पाइँदैन । ओह्रान पामुकको ‘माइ नेम इज रेड’ पनि त्यो पुस्तक हो । त्यस बेला चाहिँ लज्जितै भइन्छ ।
मैले प्रायः उपहारमा दिइरहने पुस्तक ?
‘उलार’ । नयनराज पाण्डको यो पुस्तक मैले धेरैलाई उपहारस्वरुप दिएको छु तर त्यो धेरै वर्षअघि दिएको थिएँ । हिजोआज चाहिँ त्यस्तरी उपहार दिइएको छैन । अर्को चाहिँ महिलाहरुलाई तेहमिना दुर्रानीको ‘माई फ्युडल लर्ड’ पनि उपहारमा दिएको छु ।
ज्ञान भनेको किताबमै पाइन्छ !
ज्ञान केमा पाइन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने सायद उत्तरमा आउला, किताबमा। मेरो अनुभवले भन्छ– ज्ञान तीन किसिमले पाइन्छ। मैले गौतम बुद्धको जस्तो ध्यानबाट प्राप्त हुने तत्वबोधी ज्ञानको कुरा गरिरहेको छैन। मेरो किसिमको ज्ञान पहिलो– किताब पढेर, दोस्रो– संगत गरेर अनि तेस्रो– यात्रा गरेर पाउने अनुभव छ।
किताबी बिक्री: कोरोनाभन्दा करको डर
केही महिनादेखि किताबमा कर लगाइएयता पुस्तकको व्यापार सुस्त भइरहेका बेला कोरोनाको त्रासले अझ ठूलो समस्या थपिएको छ। पुस्तक व्यापारको लाइफलाइन मानिने फुटपाथको व्यापार यतिबेला यति सुस्ताएको छ कि पुस्तक व्यापारीहरु नै पलायन हुने अवस्था आएको छ।
'लामाे समय पढाएँ, अब साहित्य सेवा'
‘ऐना’ उपन्यासको लागि मदनपुरस्कार प्राप्त साहित्यकार रामलाल जोशीको अगुवाईमा फागुन १४ देखि सात दिनसम्म सुदूरपश्चिम विश्व साहित्य महोत्सव आयोजना भयो। कार्यक्रममा तीन सयभन्दा बढी लेखक र ५२ वटा सत्रमा छलफल भए।